ESI EBUDATA D3D11.DLL WEE DOZIE NJEHIE D3D11 MGBE Ị MALITERE EGWUREGWU - WINDOWS - 2019
Esi ebudata d3d11.dll wee dozie njehie D3D11 mgbe ị malitere egwuregwu
N'oge na-adịbeghị anya, ndị ọrụ na-ezutekarị njehie dị ka D3D11 CreateDeviceAndSwapChain adabaara, "Emezughị ịmalitezie DirectX 11", "Usoro ahụ enweghị ike ịmalite n'ihi na d3dx11.dll faịlụ na-efu na kọmpụta" na ihe ndị yiri ya. Nke a na-emekarị na Windows 7, ma n'ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike izute nsogbu na Windows 10.
Dị ka a pụrụ ịhụ site na ederede nke njehie ahụ, nsogbu ahụ dị na nhazi DirectX 11, ma ọ bụ kama nke ahụ, Direct3D 11, nke d3d11.dll faịlụ bụ ọrụ. N'otu oge ahụ, n'agbanyeghị eziokwu na, na-eji ntụziaka na Ịntanetị, ị nwere ike ilebanye anya na dxdiag wee hụ na arụnyere DX 11 (na ọbụna DirectX 12), nsogbu ahụ nwere ike ịnọgide. Nke a nkuzi na-enye nkọwa gbasara otu esi edozi D3D11 CreateDeviceAndSwapChain Ihie ma ọ bụ d3dx11.dll na-efu na kọmpụta.
D3D11 njezi mgbazi
Ihe kpatara njehie a na-atụle nwere ike ịbụ ihe dịgasị iche iche, ihe kachasị nke ya
Kaadị vidiyo gị adịghị akwado DirectX 11 (n'otu oge ahụ, site na ịpị igodo Win + R na ịbanye dxdiag, ị nwere ike ịhụ na arụnyere 11 ma ọ bụ 12. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na e nwere nkwado maka mbipute a site na kaadị vidiyo naanị na faịlụ nke mbipute a arụnyere na kọmputa).
Enweghi ike ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala mbụ ọhụụ na kaadị vidiyo - ebe ndị ọrụ nchịkwa na-agbalịrị imelite ndị ọkwọ ụgbọala site na iji "Mmelite" na njikwa ngwaọrụ, nke a bụ usoro na-ezighi ezi: ozi ahụ "Onye ọkwọ ụgbọala adịghị mkpa ka emelite ya" na usoro a na-apụtakarị obere.
Eweliteghị mmelite dị mkpa maka Windows 7, nke nwere ike iduga n'eziokwu ahụ bụ na ọbụna na DX11, d3d11.dll faịlụ ma kwado kaadị vidiyo, egwuregwu dịka Echebere 2 nọgidere na-akọ akụkọ njehie.
Ejikọtara isi ihe abụọ dị na ya ma nwee ike ịchọta ya n'etiti ndị Windows 7 na Windows 10.
Ụzọ ziri ezi nke ihe maka njehie na nke a bụ:
Jiri aka na nbudata ndị ọkwọ ụgbọala kaadị vidiyo mbụ site n'aka AMD, NVIDIA ma ọ bụ weebụsaịtị Weebụ (lee, dịka ọmụmaatụ, Olee otú iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA na Windows 10) ma wụnye ha.
Gaa na dxdiag (Nweta R igodo, pịa Dxdiag na pịa Tinye), mepee "Ihuenyo" taabụ na mpaghara "Ọkwọ ụgbọala" gee ntị na "Direct3D DDI" ubi. Na 11.1 na n'elu, njehie D3D11 ekwesịghị igosi. Maka ndị dị obere, o yikarịrị ka ọ bụ ihe enweghị nkwado site na kaadị vidiyo ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala ya. Ma ọ bụ, n'ihe gbasara Windows 7, na enweghị nwelite nwelite achọrọ, nke bụ n'ihu.
Ịnwere ike ilele ụdị nke ngwa ngwa nke DirectX na mmemme ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, na AIDA64 (lee otu esi achọpụta nsụgharị nke DirectX na kọmputa).
Na Windows 7, njehie D3D11 na nhazi nke DirectX 11 na mmalite nke egwuregwu nke oge a nwere ike ịpụta ọbụna mgbe a na-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na kaadị vidiyo abụghị nke ndị ochie. Ị nwere ike idozi ọnọdụ dị ka ndị a.
Etu ibudata D3D11.dll maka Windows 7
Na Windows 7, ndabara nwere ike ọ gaghị abụ faịlụ d3d11.dll, na ihe oyiyi ndị ahụ dị ugbu a, ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ na egwuregwu ọhụrụ, na - eme ka njehie mmalite D3D11.
Enwere ike ibudata na arụnyere (ma ọ bụ emelite ma ọ bụrụ na ọ dị na kọmpụta) site na weebụsaịtị Weebụ Microsoft dị ka akụkụ nke mmelite wepụtara maka 7-ki. Download faịlụ a iche iche, site na saịtị ndị ọzọ (ma ọ bụ wepu na kọmputa ọzọ) Agaghị m akwado, ọ gaghị ele anya na nke a ga-edozi njehie d3d11.dll mgbe ị malitere egwuregwu.
Maka nrụnye kwesịrị ekwesị, ịkwesịrị ibudata Windows 7 Platform Update (maka Windows 7 SP1) - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=36805.
Mgbe nbudata faịlụ ahụ, gbanye ya, ma kwenye na ntinye melite KB2670838.
Mgbe ịchichachara nwụnye na mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ, ụlọ akwụkwọ ọjụjụ a ga-enwe ọnọdụ kwesịrị ekwesị (C: Windows System32 ), na njehie n'ihi na d3d11.dll na-efu na kọmputa ma ọ bụ D3D11 CreateDeviceAndSwapChain. na i nwere ngwa ngwa nke oge a).